About Us - Zhejiang Yuda Intelligent Technology Co., Ltd.
Zhejiang yuda co caaqil., LTD ., Ka dib markii yueqing guangke qalabka co korontada., LTD., Aasaasay sanadkii 1997 oo la aasaasay sanadkii 2003, waxa uu taariikh u ah in ka badan 20 sano. Shirkadda waxa uu ku yaalaa yueqing magaalada Liu, caasimadda ah ee qalabka korontada ee Shiinaha, waxaana la ganacsi oo kala duwan isku dhafaya sayniska, warshadaha iyo technology trade.With fasalka-koowaad iyo horumarinta xoog iyo kooxda iibka, alaabta waxaa dhoofiyo Japan, bari Asia , koonfur Asia, bariga Europe, North America iyo East.Over Dhexe 20 sano oo shaqo adag iyo dadaal raynayn, si tartiib ah sameeyay ee miisaanka iyo falsafada ganacsi u gaar ah.
wax soo saarka iyo iibka ee shirkadda ayaa la sii kordhaya sannad ka sannad, iyo awoodda wax soo saarka iyo horumarinta ee alaabta ka soo gaadhay heer hoggaamineed ee shirkadda industry.The ayaa sidoo kale si joogto ah barayaa technology sare iyo qalabka wax soo saarka si toos ah gudaha iyo dibaddaba, si ay u siiyaan wax soo saarka dheeraad ah oo xirfadeed oo loogu talagalay macaamiisha.
(Waxyaabaha ugu muhiimsan: shido button, nalalka LED, kuul LED, buzzers, nalalka digniin, loox taararka, backlight LED oo kala duwan nalalka LED iyo waxyaabaha keydinta tamarta lamps.Green incandescent, ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo, si ballaaran loo isticmaalo xoog, isgaarsiinta mishiino, tamarta, aerospace, gaadiidka, kiimikada, maraakiibta iyo industries.I kale ururtay aragnimo hodan ku ah wax soo saarka alaabta.
1. Hordhac of Guangke Electric:
1.) waayo-aragnimo Dhoofinta ka badan 20 sano.
2.) Mid ka mid ah warshadaha ugu weyn ee ku takhasusay laambad signal iyo pushbutton ee Shiinaha.
3.) Waxaan leenahay shaybaarka u gaar ah si ay u tijaabiso iska caabin olol / noolaa korontada / heerkulka iska caabin kaca / daxalka / baaritaanka gaboobaya, iwm
1.) style kala duwan, midabka iyo tirada laga beddeli karaa.
2.) qiimaha tartanka, sumcad wanaagsan iyo waqtiga dhalmada degdeg ah.
3.) tayada adag loo hubiyo in our tayo wanaagsan leh.
3. Signal Siraaj Maqaallo:
1) nooc design Available:
a) midabka Double
b) Flash iftiin
c) Anti-faragelinta signal laambad
d) Flash qaylo on salka AD signal iftiin
2) calaamadaha gaarka ah ee la xardhay kartaa gudaha nalka
3 ) dhisay-in silig fur badan yahay ammaan ah oo ku haboon
4) il Light waa dhalaalka sare iyo chips midabka LED adag, waa nolol dheer, isticmaalka tamarta hoose, miisaanka iftiin badan laambad iyakana iyo laambad incandescence.
5). Cover of ilayska waxaa loo sameeyey by lama filaan ah oo xoog leh PC u adkaysta.
1.) iibiye tababar wanaagsan u jawaabi doonaa baaritaan la 8 saacadood
2.) 5 sano damaanad
5. waqti Delivery:
10-15days ka dib markii lacagta / deposit